प्यानकेकहरू - एक परम्परागत, सबै आफ्नो मनपर्ने र प्राय पकवान को सबै व्याख्याहरु मा तयार छ। तिनीहरूले अपवाद बिना तयारी र सबै Housewives लागि फैंसी को एक ठूलो उडान को सादगी घूस। यो पकवान को घटक धेरै केही छन्, तर केही प्यानकेकहरू लागि व्यञ्जनहरु को एक किसिम भरिएको छन् जस्तो थियो। तर Shrove मा मंगलवार प्यानकेकहरू बस यो छुट्टी को एक छुट्टी मना छन्।
मीठो वेनिला प्यानकेकहरू धेरै लोकप्रिय Kiddies छन्। यहाँ एक सरल छ प्यानकेकहरू लागि नुस्खा। पहिलो तपाईं वेनिला चीनी संग अन्डा मिश्रण र नुन थप्न आवश्यक छ। बिस्तारै पीठो शुरू, राम्रो मुछ्नु। दूध एक गिलास पोख्नुहोस् र गांठ तोड्न। त्यसपछि पग्लियो फारममा मक्खन को एक मिश्रण मा खन्याउन। आटा thickish हो भने, तपाईं अझै पनि इच्छित स्थिरता गर्न दूध थप्न सक्नुहुन्छ। को तिनीहरूको लागि छुट्याइयो मा प्यानकेकहरू सर्वश्रेष्ठ ओवन पैनकेक पैन कम Bumpers संग। त्यसपछि तपाईं राम्रो न्यानो आवश्यक पग्लियो घिउ आटा समान रूप बाहिर फैलाउन छ भनेर, एक कोण मा पैन पकड गर्दा यो पैन को सम्पूर्ण सतह skewing छ भनेर, र एक सानो आटा खन्याउन। पैनकेक browned र बिस्तारै बबल गर्न थाले एक पटक, त्यसपछि यसलाई पल्टाउनु, शीर्ष मा एक सानो तेल खन्याउन। बस ब्राउन पैनकेक र अर्कोतर्फ संग। पूर्ण सुनको पैनकेक हटाउन र दोस्रो अघि बढ्नु, र यति मा। तालिका मा क्रीम वा जाम यी प्यानकेकहरू सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।
तर प्यानकेकहरू लागि सजिलो नुस्खा।
खाना पकाउने लागि धेरै सानो आवश्यक:
250 G पीठो;
दूध एक गिलास;
चीनी को एक चम्मच;
एक चक्कु को टिप मा नुन;
frying लागि बोसो।
एक कचौरा मा पीठो स्लाइड खन्याउन। बीचमा एउटा सानो इन्डेन्टेसन बनाउन र बिस्तारै, बिस्तारै दूध आधा कप मा खन्याउन र त्यसपछि एक चम्चा को ठूलो हलचल। हातमा दूध छ गर्दैन भने, तपाईँले सजिलै पानी संग प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईं राम्ररी आटा मुछ्नु गर्न आवश्यक, त्यसैले कुनै गांठ थियो। तपाईं त कुटपिट, अन्डा, चिनी र नुन बाँकी जो दूध, थप्न सक्नुहुन्छ। आटा खट्टा क्रीम जस्तै हुनुपर्छ। सजिलै सुखा गर्न प्यानकेकहरू, तपाईं दुई घण्टा खडा परीक्षण गर्न आवश्यक छ। , Frying धक्का बिना, चिल्लो हुनुपर्छ अन्यथा यो पाक प्यानकेकहरू असर गर्नेछ। एक सानो सूर्यमुखी तेल मा एक कचौरा तयार आलु छील र आधा मा कटौती। त्यसपछि प्लग मा आधा पिन र जसबाट तेल पैन चिकनाना। पान त तपाईं पैन को किनारा मा आटा खन्याउन र पातलो तह समान सम्पूर्ण तल ढाकिएको यसलाई गर्न झुकाव गर्न आवश्यक अप राम्रो न्यानो हुनुपर्छ। एक पटक एक पैनकेक पार्टी सुनको रंग प्राप्त, यो उल्टाउन पर्छ। खान प्यानकेकहरू दूध, खट्टे क्रीम, पग्लियो घिउ र जाम हुन सक्छ। यो प्यानकेकहरू लागि एक धेरै नै सरल नुस्खा जस्तो देखिन्छ।
हरेक गृहिणी को पैनकेक व्यञ्जनहरु गर्न यसको आफ्नै समायोजन बनाउँछ। तर पारंपरिक बुद्धि दूध संग प्यानकेकहरू लागि एक सरल नुस्खा छ।
यसो गर्न, तपाईं निम्न लिनु आवश्यक:
पीठो - दुई चश्मा;
दूध - आधा लीटर;
पछि यो प्यानकेकहरू लागि एक सरल नुस्खा छ, का सबैभन्दा सरल कार्य सुरु गरौँ। पहिलो तपाईं गहिरो कचौरा लिन र उनको अन्डा मा पिट्न त एक सानो चीनी र अलिकति नुन खन्याउनु आवश्यक छ। हल्कासित कुटपिट, र तपाईं बिस्तारै ठूलो पटक जगाएर, आटा थप्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आटा बाक्लो छ भने, त्यो प्रावधान सधैं खुसीले गदगद दूध बढी थपेर सही गर्न सकिन्छ। सबै तपाईं एक मलाईदार स्थिरता नभएसम्म राम्ररी मिश्रण गर्न आवश्यक छ। यहाँ सूर्यमुखी तेल को एक चमचा पोलेको छैन खन्याउन सम्भव छ। त्यसपछि - सबै सामान्य पकाउने प्रक्रिया। आटा धूपदान तल कवर पातलो तह, को पैनकेक को गुलाबी पक्ष आशा र चाँडै तलमाथि यो बारी। दुई मिनेट पछि, एक पैनकेक तयार छ।
मूल स्वाद को प्रशंसक एक सानो दालचिनी प्यानकेकहरू लागि यो सरल नुस्खा मा राखे। प्यानकेकहरू र fillings सबै प्रकारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यो कल्पना मा निर्भर गर्दछ।
चामल चाउचाउ र व्यञ्जन यसलाई देखि
पाकेका सामन खाना पकाउने
Lasagna Bolognese। क्लासिक नुस्खा
ग्रिल मा प्रसिद्ध प्राच्य Kebab
एउटा अचम्मको ठाउँ - येकाटिरिनबर्ग मा एक dolphinarium
पवित्र हप्तामा के छ? उत्कृष्ट पोस्ट: के गर्न सक्छ र किन?
स्वादिष्ट र स्वस्थ - साथ लसुन चुकंदर
गर्दनको myositis को कारणहरू, लक्षणहरू र उपचार
यो आकर्षक माउसुलीबाट मनपर्ने खेलौना संग जा रहेको छ, मुस्कान गर्न ceases कहिल्यै
सानो घरेलु: कसरी आफ्नै हातले निर्माण गर्न? भित्री डिजाइन, फोटो सुझावहरूको
Gotthard टनेल: विवरण। स्विट्जरल्याण्ड मा Gotthard टनेल खुल्ने दिन
सुरक्षा रूपमा Kevlar पन्जा